Ukuphupha ngendlela yendlela enye Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ngokukodwa abo baqhuba imoto ukugcwala kwendlela ngokuqinisekileyo bayayazi indlela eya kwicala elinye. Abahamba ngeebhayisikile bahlala bathintelwe kwicala elinye lokuhamba kwindlela enye, ngelixa abahambi ngeenyawo bahlala bekhululekile ngokupheleleyo.
Ngokusisiseko, isitrato esiya kuphela sibonakaliswa yinto yokuba izithuthi zinokuhamba kuphela kwicala elinye kwesi sitrato. Nabani na ongayifezekisiyo le mfuno usemngciphekweni omkhulu, njengoko imeko imbi kakhulu, ukungqubana kwezithuthi ezizayo kunokubakho. Abasebenzisi bendlela eJamani banokuxela ukuba isitalato yindlela eya kwicala elinye ukusuka kuphawu olubomvu olujikelezileyo kunye nebha emhlophe ethe tye.
Injongo yesitrato esihamba ngendlela enye kukuqondisa ukugcwala kwabantu kwicala elithile ngokuthintela ukhetho lokuhamba. Olu luvo lusisiseko lukwafunyanwa kwakhona xa kutolikwa iphupha lendlela yesitalato. Apha, kwakhona, indlela yendlela enye ithetha isithintelo kumathuba ephupha okuhamba, ukuyinika indlela, ngokuthetha. Lithetha ntoni elo phupha kuwe, ungalifunda apha ngezantsi.
1 Uphawu lwephupha «indlela yendlela enye» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «indlela yendlela enye» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «indlela yendlela enye» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «indlela yendlela enye» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolika ngokuchanekileyo iphupha lendlela eya ngasendleleni, kubalulekile ukuba uqale ngokujongana ngokufutshane nesimboli yamaphupha esitalato. Ukutolikwa kwamaphupha, oku kubonisa indlela yobomi bephupha, ohamba kulo kubomi bakho bonke. Kwangelo xesha, le ndlela ayifanelanga ukuba ithe tye kwaye ngaphandle kweefolokhwe kwaye kunokwenzeka ukuba iphupha eli liya kujika libuye umva kancinci.
Ukuba uphupha ngendlela yendlela enye, kwiimeko ezininzi isalathiso sisebenza nakwisimboli yephupha Indlela yobomi. Apha, kwakhona, iphupha linokumela indlela yakho ebomini. Kodwa kukho ezinye izithintelo kulo mfanekiso wamaphupha: Amaxesha amaninzi, indlela-yendlela enye ephupheni lakho ithe tye kwaye ngaphandle kokujika kwaye awuvumelekanga ukuba ubuye umva.
Ngamanye amaxesha olu phawu lwendlela enye yokuphupha isitalato luphawu lokuba ngoku ukwinqanaba lobomi bakho apho ungenakho ukubuya umva kwaye kufuneka uqhubeke kwicala elixeliweyo. Ukutolikwa kwephupha, kubalulekile ukuba ujonge ukuba ingaba indlela esephupheni yindlela yendlela enye ephawulwe ngophawu okanye ukuba bonke abantu bayayiqhuba besiya kwicala elinye, umzekelo, ngaphandle komkhwa okanye ukungazi, nangona isitalato ithiyori sikhokelela kumacala omabini. Kufanelekile.
Ukuba ukhe walifumana ityala lesibini, usenokucinga nje ukuba akukho kubuya mva kanti nawe unguye. Buya umva ingayenza. Umzekelo, uloyiko okanye ikratshi linokukuthintela ekuvumeni impazamo kwicala lobomi kwaye uqale kancinci kamva. Ngokukodwa ukuba kuya kufuneka uqhube kwisitalato sendlela eya kwicala elingalunganga ephupheni lakho, oku kunokubandakanya umnqweno wokubuyela umva.
Ukuba iphupha malunga nendlela yendlela enye libonakala lilungile, ke uphawu luya kubonisa Ukuzimisela kumaxesha ngamaxesha ungaya phambili ngokukhawuleza ngaphandle kokuphazamiseka. Umfanekiso wephupha unokuba ngowakho Inkani y Icala elinye kuba.
Uphawu lwephupha «indlela yendlela enye» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwamaphupha ngokwengqondo kwindlela enye ehlala isebenza imiba engekho zingqondweni apho aphupha khona. Umfanekiso wephupha uqondwa ikakhulu njengencam ephuma kula malungu angaphakathi, abonisa ukuba iphupha lisaqhubeka kwindlela ethe tye: indlela eya kwicala elinye. Iphupha kufuneka, ke ngoko, lahlulwe kwixesha langaphambili, ukuze yonke into isesitalatweni ngasemva kwayo, kwaye ayisathatheli ngqalelo ukuba ihla ngesitrato kwakhona.
Nangona kunjalo, ukuba usiya kwicala elingalunganga kwisitrato sendlela enye, ke, ngakumbi ukuba ipolisa okanye omnye umsebenzisi wendlela akakunqandi, kusenokwenzeka ukuba awukwazanga ukwahlukana nexesha lakho elidlulileyo. Umfanekiso wephupha lendlela yesitalato esiya kwicala elinye ubonakalisa ukuba kunzima kangakanani kuwe ukushiya okudlulileyo ngasemva.
Indlela yendlela enye njengephupha, kutoliko lwengqondo, ikwabhekisa kwinto yokuba, kwelinye icala, ungathanda ukushiya indlela oyikhethileyo, isitalato, ukuze uthethe, kwaye wenze ngokwahlukileyo, kodwa Kwelinye icala, uyazi ukuba indlela ekhethiweyo kufuneka ishiywe kuphela ngezizathu ezifanelekileyo. Mhlawumbi ukuba uphupha ngendlela enye, iphupha lifanekisela ungquzulwano lwangaphakathi.
Uphawu lwephupha «indlela yendlela enye» - ukutolika kokomoya
Kubantu abaninzi, indlela yabo yobomi ikwaquka izinto zokomoya. Ukuba iphupha lendlela yesitalato litolikwa, kuya kufuneka unike ingqalelo iimvakalelo zakho ephupheni. Ukuba iimvakalelo ezintle ziye zanamandla kunawe wanelisekile kunye nendlela yakho yobomi kunye nokukhula kwakho ngokomoya.
Ukuba uneemvakalelo ezingakhiyo, unokuba neengxaki ezininzi kwezakho. i sigqibo.